Fakafaka: mila fanarenana goavana ny fampianarana | NewsMada
Fakafaka: mila fanarenana goavana ny fampianarana
Nanana fomba maro nentina « nanjanaka » firenena iray ny mpanjakazaka an-tanin’olona. Anisan’ireny ny fanimbana tanteraka ny endri-panabeazana ny taranaka ao amin’ilay tany “zanahina”. Fitaovana nampiasaina tamin’izany ny sekoly sy ny zavatra nampianarina tao. Hatramin’izao anefa, mbola tarazon’izany avokoa no iainan’ny tontolon’ny fampianarana any amin’ireo firenena “nozanahina”, anisan’ireny i Madagasikara. Tsy mifankaiza fa vao mainka aza nohatevenina fatratra ilay paikady nentin’ny “mpanjanaka”. Ohatra, tsy maintsy atao izay hisian’ny korontana na savorovoro any anivon’ny fampianarana ambaratonga ambony ao anatin’ny taom-pianarana iray mba tsy hananan’ilay firenena manam-pahaizana sy mpikaroka tsara hofana. Tranga izay zary mandeha ho azy ny fahitana azy kanefa faran’izay mampieritreritra satria, olana iray efa ampolo taona ve no nisiany ka hatramin’izao mbola tsy voavaha ihany fa tsotsorina amin’ny hoe: “manao grevy ny mpianatry ny oniversite” atsy na aroa?
Tahaka izany koa ny aty amin’ny ambaratonga fototra rehetra. Fandaharam-pampianarana efa lany andro, tsy mamaly intsony ny filan’i Madagasikara sy ny Malagasy. Manginy fotsiny ny tsy fahasahiana sy tsy fanomezan-danja sy hasina ny tenindrazana hoenti-manabe ny taranaka malagasy. Paikady napetraky ny “mpanjanaka” avokoa ireo. Vao mainka nohamafisin’ny zava-nitranga taty aoriana izany rehetra izany. Aiza ve ka ny mpampianatra hampita fahalalana indray no atao tsinontsinona. Karamaina ambilombazana. Sahiranina hatotototo etsy sy eroa vao mahazo ny valin-kasasarany, sns. Inona ny vokatra tsara antenaina amin’izany? Mifatratra any amin’ny fanabeazana ny zaza malagasy avokoa ny akon’ireo rehetra ireo.
… Mila fanarenana goavana ny fampianarana eto Madagasikara satria io ihany koa no anisan’ny singa iray hamantarana fa efa miaina ao anaty fahaleovantena marina ny firenena iray na tsia. Raha mbola tahaka izao hatrany ny lalana diavin’ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara, tsy mbola azo antoka fa hitsiry ao anatin’ny ankamaroan’ny zaza malagasy ny fitiavan-tanindrazana.
Rehefa tsy hanarina ny lesoka ny tompon’andraikitra voakasik’izany, mila mandray andraikitra ny ankohonana amin’ny fampitana sy fampahafantarana amin’ny taranaka ho avy ny amin’izay tokony ho fantany momba azy sy ny Malagasy ary i Madagasikara. Mila mandray andraikitra ny ray aman-dreny amin’ny fampitana amin’ny taranany fa Malagasy izy ary i Madagasikara no tanindrazany!